Amin'ny Sabata Very ho an'ny Jentilisa - Raby Michael Avraham
Resy tamin’ny Jentilisa ny Sabata
Responsa > Sokajy: Fandalinana Talmodika > Resy tamin’ny Jentilisa ny Sabata
Isaac Nanontany 6 taona lasa izay
1) Ny Torah dia nanafaka antsika tamin'ny Sabata very ho an'ny Jentilisa… nanazava ny anarana matsiro izay tsy maintsy hitahiry ny zo fototra amin'ny Jentilisa, fa ny hoe 'Chassidut' dia tsy voatery…
Mifandraika amin’izay nohamafisin’ity farany (Hazo’a sy ny hafa) fa ny didy fito izay tsy maintsy atao na ny tsy Jiosy aza dia zavatra tsy maintsy atao amin’ny lafiny ‘fahamarinana sy fitondran-tena’.
Ary jereo ny tenin'i Maimonides momba ny fanafahana ny ombin'ny Isiraely izay namely ny omby jentilisa, izay tsy mitaky izany ao amin'ny lalàny… Tsy mitondra azy mihoatra noho ny tenany isika…
Ny Gemara ao amin'ny Synedriona dia milaza fa voarara ny mamerina ny fatiantoka ho an'ny jentilisa… Nanazava i Rambam fa mba tsy hanamafisana ny ratsy fanahy eto amin'izao tontolo izao izany (dia tokony havela ny jentilisa mendrika, na dia tsy mponina aza izy), Nanazava i Rashi fa manambara izany fa tsy miverina izy noho ny didy Miverena, na ahoana na ahoana dia misy fandrarana (raha tsy hoe natao noho ny fanimbazimbana an'Andriamanitra na noho ny fanamasinana ny anarana)...
Ny fanontaniako dia mety hiova ve ireo fitsipika ireo araka ny fiovan'ny 'fahamarinana sy fitondran-tena' izay eken'ny vahoaka? Amin’ny toe-javatra izay hitan’ny tsirairay fa ny tokony hatao dia ny mamerina ny fatiantoka, hiova ve ny lalàna? Any amin'ny firenena sasany dia misy lalàna mihitsy aza (dia azo atao ny mametraka ny 'lalàna' ao amin'ny didin'i Kim, ary raha adidy ny Jentilisa dia tsy ho latsa-danja amin'izany isika)…
Na lazaina aza fa tsy misy obligation dia morality tsy Torah 'fotsiny' izany, farafaharatsiny tsy hisy adidy (na dia araka ny voalazan'i Rashi) aza ... Ny Torah dia tsy obligatoire fa misy antony hiverenana, ny fitondran-tena ekena amin'izao androntsika izao… Ary tsy noho ny mitzva…
Ny raby sasany dia manoratra fa ilaina ny miverina anio noho ny fanamasinana ny anarana… fa amiko toa fandosirana izany, ny fanamasinana ny anarana dia tsy voatery, ary toa avela ihany raha tena mikasa ny hanamasina ny anarana izy…
2) Inona no dikan'ny fiverenana 'noho ny fanamasinana an'Andriamanitra' (araka ny voalaza ao amin'ny tantaran'ny Jerosalema)... Raha tsy nitifitra fotsiny ny Torah fa nandrara - inona no tsy mety hidera ny vahoakan'ny Isiraely noho ny zavatra ho azy ireo? tena fandrarana ve?
Michi Staff Namaly 6 taona lasa izay
Ekeko tokoa fa resaka ankolaka ny resaka fanamasinana ny anarana. Raha ny hevitro dia misy adidy tanteraka ny mamerina anio, araka ny nosoratan'i Hameiri. Manoratra ianao fa eo amin'ny lafiny fitondran-tena no ataony fa tsy amin'ny lafiny lalàna, ary ny hevitro dia izao no hametrahako hevitra: Voalohany, amin'izao andro izao dia lalàna izany fa tsy fitondran-tena, satria tsy maintsy mamerina a fatiantoka ho an'ny jentilisa tahaka ny Jiosy ary avy amin'io andininy io ihany. Ny Gemara ao amin'ny BK Lez dia milaza mazava fa nanome vola ho an'ny Isiraely izy ireo satria tsy nitazona ny XNUMX mitzvos. Faharoa, na dia esoriny aza dia inona no olana amin'izany?!
Ary ny nanontanianao raha fandrarana izay hitanay fa namela ny fandraràna ny fanimbazimbana sy ny fanamasinana ny anarana, dia ny mpanome. Tsy fandrarana izany fa valin-teny manoloana ny toe-javatra manokana nisy ny Jentilisa tamin’izany fotoana izany, ka na dia tamin’ny fotoan’androny aza dia nisy toerana hamerenana ho amin’ny fanamasinana ny Anarana. Izany no tena porofo fa tsy fandrarana izany.
Jereo ny momba izany ao amin'ny lahatsoratro momba ny Jentilisa amin'izao androntsika izao:
Ary momba ny toe-tsaina manoloana ny jentilisa sy ny fiovan'ny halakhah eto.
Araka ny filazan'i Hameiri dia mazava fa tsy maintsy averina izany…
Manontany aho araka ny ambaran'ireo mpanelanelana izay tsy nanaraka ny fomba fanaony, ary ny lalàn'ny jentilisa amin'izao androntsika izao dia tsy tokony hoharina amin'ny lalàn'ny mponina…
Ny Gemara sy ny poskim dia milaza mazava fa ankoatry ny fanafahana ny Torah dia misy fandrarana amin'ity raharaha ity (ambara fa avy any Durban izy), ary niady hevitra mihitsy aza…
Araka ny voalazan'i Rashi, ny tiana holazaina dia ny hampisehoana fa noho ny fiampangana no mamaly anay fa tsy zavatra hafa.
Fa izay manao amin'ny anaran'ny fitondran-tena - toa manao araka izay tian'ny olon-kendry hisakana azy, dia mahita fa tsy noho ny lanitra no ataony.
Voalohany, tsy ilaina koa ny fomba Rashi. Mety ho noho ny lalàm-panorenan’ny jentilisa no hanaovana ilay fandrarana na mba hahazoana sitraka eo imason’izy ireo. Fa ny fanaovana ho amin’ny fitondran-tena dia mitovy amin’ny fanaovana ho amin’ny fanamasinana an’Andriamanitra. Ny fitondran-tena koa dia apetraka amintsika avy amin'ny Torah (ary nanao ny tsara sy ny tsara ianao).
Na izany aza, na dia marina aza ny hevitrao fa misy fandrarana ny fanaovana izany noho ny fitondran-tena, dia tsy azoko ny soso-kevitrao hoe tokony hiova izany. Voalohany, raha ny moraly ankehitriny no atao hoe mamaly dia noho ny moraly indray no ataonao ka izay no voarara. Faharoa, amin'ny fahatsoran'izy ireo, na tamin'ny andron'izy ireo aza, dia lamina ara-moraly izany, satria araka ny hevitrao dia voarara ny mamaly ratsy ny fitondran-tena.
Saingy zavatra hafahafa izany rehetra izany. Hatramin'ny oviana no voarara ny manao zavatra mifanohitra amin'ny fitondran-tena mba hanehoana fotsiny fa mandika ny lalàna? Zavatra mahagaga ireo.
Ny fanontaniana dia hoe mety hiova ve ny fitsipika ara-moraly…
Ny Torah dia tsy mandrara afa-tsy ny famonoana olona sy ny fandrobana amin'ny jentilisa satria noheverina ho fahamarinana sy fitondran-tena izany, ary tahaka ny jentilisa ihany no nanolorana azy ho amin'ny fahamarinana sy ny fitondran-tena, dia toy izany koa isika amin'izy ireo. ' fa eo aminay ihany no ataontsika (ary araka ny voalazan'i Rashi dia voarara amin'ny hafa aza, mba tsy hanamaizina)
Tsy azoko hoe inona ny resaka. Efa nohazavaiko izany. Azo antoka fa mety hiova ny fitsipi-pitondran-tena. Fa raha ny hevitrao no raran'i Rashi ny fanaovana zavatra noho ny antony ara-moraly (izay mazava ho azy fa tsy mitombina raha ny hevitro) dia tsy hanova lalàna izany. Hisy adidy ara-moraly sy fandrarana halakhic.
Miaraha misoratra anarana 3,094 fanampiny
Momba ny tsanganana 36
Fametrahana finoana ny rationality amin'ny olona tsy misaina
Fanimbazimbana an'Andriamanitra amin'ny fiampitana mena
דו On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Ori On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Haim On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Michi On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)